Iwo mazita matatu matsva kubva kuna Karl Ove Knausgård, Tana French naLuca D'Andrea. | Zvazvino Zvinyorwa
Iwo mazita matatu matsva kubva kuna Karl Ove Knausgård, Tana French naLuca D'Andrea.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Biography, Vanyori, Mabhuku, Novela, Nhema nhema
Dzazvino kubva kuNorway Karl Ove Knausgard, irish Tana french uye chiitaly Luca D'Andrea enda kuvaratidziri vezvitoro zvikuru nemadiki. 3 mazita anonakidza kwazvo kutarisa mazuva ano ekuzorora. Tinoenda navo.
1 Karl Ove Knausgård - Inofanira Kunaya
2 Tana French - Kupindira
3 Luca D'Andrea - Chinhu Chakaipa
Karl Ove Knausgård - Inofanira kunaya
Knausgård (Oslo, 1968) ndiye munyori weNorway na kuwanda kwepasirese kuratidzira yenguva dzichangopfuura (uye nemvumo yevanokudzwa vehukama vakaita saNesbø, Fossum kana Bjørk). Muna 2009 akaita chirongwa chisingaenzaniswi chekunyora: rake rehupenyu hwehupenyu, ane zita rekutanga raive Kurwira kwangu. Icho chiri pamusoro nhanhatu, ane bhuku rake rekupedzisira rakaburitswa muna 2011 munyika yekwake. Ikoko akagashira yakawanda mibairo uye akawedzera yakatowanda nhamba yevaverengi.
Migumisiro yacho: shanduro nekukurumidza kune mimwe mitauro, kugoverwa kwenyika dzese uye maitiro zvakare nekukasira uye vatsoropodzi vakanaka kwazvo. Pano panguva iyo mazita mana ekutanga asvika: Kufa kwababa, Murume murudo, Chitsuwa chehucheche y Kutamba murima. Inofanira kunaya ndeyechishanu.
Knausgard anoenderera mberi achirondedzera uye achizviongorora hupenyu hwake uye maitiro ako ekunyora. Ane makore makumi maviri uye anotanga kunyora nemanyepo anorasika nekukurumidza. Iye anotora zvinyorwa zvake puerile, izere nema clichés, uye anoshungurudzika kuona kuti haambove munyori. Kune izvi zvinowedzerwa zvavo kuremara munharaunda uye matambudziko avo ari kuenderera nedoro uye nechisimba. Asi anoenderera mberi achimanikidza kuenderera.
Iwe unozotanga kuona kuti iwe unogonesa Kunyora mabhuku uye gare gare anozovandudza hunyanzvi hwake hwemagariro munharaunda yepedyo uye yehukama nekusangana nemukadzi wake weramangwana.
Tana French - Kupindira
Tana French (Vermont, 1973) parizvino inoonekwa se mumwe wevanyori vakanakisa vevatema mhando. Mutambi weIrish uye munyori vakaburitsa ino nyowani nyowani muna Chivabvu apfuura, vanotsoropodza senge veWashington Post kana Nguva yakakwidzwa seyakanakisa thriller ye2016. Kupindira iri nhema nhema naye kumashure kwekushungurudzwa nemhirizhonga kuvanhukadzi.
Aislinn murray, mukadzi wechidiki uye anoyevedza, anoita kunge akafa yekurova musoro kumba kwake munzvimbo inoshanda-yevashandi muNorth Dublin. Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti inyaya yakajeka yechisimba mudzimba. Iyo Detective Antoinette Conway, nyowani kuchikwata chekuuraya, achatora kuferefetwa nepo, panguva imwe chete, zviri kutambura kushungurudzwa muDhipatimendi. Iye anongochengetedza hukama hwakanaka nemumwe wake uye kunyangwe achinzwa akasimba uye akaomarara, mamiriro acho haasi nyore kwaari.
Kune vese zvinowedzerwa kuti Conway zvakare ine iyo kunzwa kwekuziva kune akabatwa, iye dzvinyiriro vatambi vechikwata kuti vasunge munhu anonyatso kuzivikanwa uye a sombra izvo zvinomunyangira munharaunda yaanogara. Mhedzisiro yacho ichave yekuferefeta kuferefeta zvakanyanya kuomarara kupfuura zvaionekera.
Luca D'Andrea - Hunhu hwehuipi
D'Andrea akaberekerwa mu 1979 muBolzano, Italia. Ikoko anogara uye anoshanda semudzidzisi. Akatanga nekunyora a vechidiki trilogy yakatumidzwa wunderkind uye muna 2013 aive munyori wemunyori wezvinyorwa zvakateedzana Magamba emakomo nezvechikwata che alpine kununura. Izvi zvakamukurudzira ichi chake chekutanga kufadza, Chinhu Chezvakaipa, iyo yakaburitswa muItari mu 2016 uye chazova chizere kutsikisa chiitiko.
Yakatengeswa kune dzinopfuura makumi matatu nyika kunyangwe isati yaburitswa uye iri kuturikirwa mumitauro makumi matatu neshanu. Kuwedzera pamusoro, vaburitsi ve Gomora vari kuenda kugadzira kugadzirisa terevhizheni.
Inotiudza iyo nyaya ye majaya matatu akaurayiwa zvine utsinye muna 1985, panguva yedutu rinotyisa, muBletterbach, koni hombe yeTyrolean. Makore makumi matatu gare gare american zvinyorwa zvinyorwa Jeremiah salinger Anouya kuzogara mumusha mudiki weAlpine nemukadzi wake nemwanasikana mudiki.
Sezvo paanosvika pakuziva vavakidzani vake, Salinger anotanga kubatikana pamusoro penyaya isina kugadziriswa. Asi hapana munhu akamukomberedza anoda kubvisa zvakapfuura. Idzo hutsinye hutsinye dzakagadzira mamiriro e kutuka uye vese vanoita kunge vanohwanda zvakavanzika zvisingataurike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Iwo mazita matatu matsva kubva kuna Karl Ove Knausgård, Tana French naLuca D'Andrea.
Frida Kahlo nehunhu hwake pamabhuku epasirese